(MRTV-4) ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ မကြာခင် မြင်တွေ့ရတော့မယ်သူက? ဆိုပြီးတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူ.. – Cele Cupid
(MRTV-4) ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ မကြာခင် မြင်တွေ့ရတော့မယ်သူက? ဆိုပြီးတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူ..
Ever Bo | December 22, 2020 | Celebrity | No Comments
မင်္ဂလာပါ ချစ်ပရိတ်သတ် ကြီးရေ ဒီနေ့ပြောပြ မယ့် အကြောင်းအရာ လေးကတော့ ကြော်ငြာ မော်ဒယ် ငြိမ်းမြတ်သူ ရဲ့ အကြောင်းလေ းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမက သူလုပ်ကိုင် နေတဲ့ အလုပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး ရိုးသား ကြိုးစား နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆို လည်း မမှားပါဘူး။
သူမကခုလို ကိုဗစ် ကာလ မှာတော့ သူလုပ်ကိုင်လျက်ရှိ တဲ့ အလုပ်တွေ ကို မရပ်နားပဲ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နေ သူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ကြော်ငြာတွေ ရိုက် (photo model) လုပ်ရင်း သူမ ကို ချစ်ခင်အားပေး တဲ့ သူတွေ ကို သူမရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ် လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေ လေ့ရှိပါ တယ်။သို့ပေမယ့် လူမှုကွန်ရက် စာ မျက်နှာပေါ် မှာ သူမက အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ခံ နေရပါ တယ်။ သူမကို အားပေး ကြတဲ့ သူတွေ လည်းရှိကြ ပါ တယ်။
တစ်ခါတစ်လေ မကောင်း တဲ့ မှတ်ချက်တွေ လည်း အားပေးခံရပါ တယ်။ တချို့ကျတော့ လည်း ဟာသအနေ နဲ့ စနောက်ကျီစယ် ကြတာ လည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။ထို့အပြင် ခုအခါမှာ လည်း ငြိမ်းမြတ်သူက MRTV-4 ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် တော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း သူမ ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှ တဆင့် ရေးသားဖော် ပြလာခဲ့ပါ တယ်။
သူမကတော့ (MRTV 4) ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ မှာ မကြာခင်တွေ့ရတော့ မယ့် တက်သစ်စ အ နုပညာ ရှင်လေးက ဆိုပြီး မျှဝေလာခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဝေဖန်သူ တွေကတော့ အမြဲလို လို သူ့ရဲ့ မန့် အောက် မှာ ဝေဖန်နေကြပြီး share များဖြင့် လည်း မှတ်ချက် တွေ အာပေးခံနေရ ပါတယ်။ အားပေးသူ တွေကလည်း ဆက်လက် ပြီး အားပေးကြသ လို တိုက်ခိုက်တဲ့ သူ တွေဟာလည်း ဆက်လက် တိုက်ခိုက် လျက်ရှိ ပါ တယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံး လည်း သူမအတွက် မှတ် ချက်တစ် ခုခု ရေးသားခဲ့ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရူ့အားပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံး လည်း သာယာ ပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ ပိုင် ဆိုင် နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန် ကောင်း တောင်းပေး လိုက်ပါ တယ် ခင်ဗျာ။
မဂၤလာပါ ခ်စ္ပရိတ္သတ္ ႀကီးေရ ဒီေန႔ေျပာၿပ မယ့္ အေၾကာင္းအရာ ေလးကေတာ့ ေၾကာ္ျငာ ေမာ္ဒယ္ ၿငိမ္းျမတ္သူ ရဲ့ အေၾကာင္းေလ းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။သူမက သူလုပ္ကိုင္ ေနတဲ့ အလုပ္ကို ခ်စ္ျမတ္နိုးၿပီး ရိုးသား ႀကိဳးစား ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဆို လည္း မမွားပါဘူး။
သူမကခုလို ကိုဗစ္ ကာလ မွာေတာ့ သူလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ တဲ့ အလုပ္ေတြ ကို မရပ္နားပဲ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေန သူ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ေၾကာ္ျငာေတြ ရိုက္ (photo model) လုပ္ရင္း သူမ ကို ခ်စ္ခင္အားေပး တဲ့ သူေတြ ကို သူမရဲ့ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္ ေလးေတြကို ျပန္လည္မၽွေဝ ေလ့ရွိပါ တယ္။သို႔ေပမယ့္ လူမႈကြန္ရက္ စာ မ်က္ႏွာေပၚ မွာ သူမက အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဝဖန္ခံ ေနရပါ တယ္။ သူမကို အားေပး ၾကတဲ့ သူေတြ လည္းရွိၾက ပါ တယ္။
တစ္ခါတစ္ေလ မေကာင္း တဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြ လည္း အားေပးခံရပါ တယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ လည္း ဟာသအေန နဲ႔ စေနာက္က်ီစယ္ ၾကတာ လည္း ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ထို႔အျပင္ ခုအခါမွာ လည္း ၿငိမ္းျမတ္သူက MRTV-4 ရဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲ မွာ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူမ ရဲ့ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွ တဆင့္ ေရးသားေဖာ္ ျပလာခဲ့ပါ တယ္။
သူမကေတာ့ (MRTV 4) ဇာတ္လမ္းတြဲေတြ မွာ မၾကာခင္ေတြ႕ရေတာ့ မယ့္ တက္သစ္စ အ ႏုပညာ ရွင္ေလးက ဆိုၿပီး မၽွေဝလာခဲ့တာ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ေဝဖန္သူ ေတြကေတာ့ အျမဲလို လို သူ႔ရဲ့ မန႔္ ေအာက္ မွာ ေဝဖန္ေနၾကၿပီး share မ်ားျဖင့္ လည္း မွတ္ခ်က္ ေတြ အာေပးခံေနရ ပါတယ္။ အားေပးသူ ေတြကလည္း ဆက္လက္ ၿပီး အားေပးၾကသ လို တိုက္ခိုက္တဲ့ သူ ေတြဟာလည္း ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္ လ်က္ရွိ ပါ တယ္။
ပရိတ္သတ္ႀကီးအားလုံး လည္း သူမအတြက္ မွတ္ ခ်က္တစ္ ခုခု ေရးသားခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။ ဖတ္႐ူ႔အားေပးၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးအားလုံး လည္း သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ေန႔ေလး တစ္ေန႔ ပိုင္ ဆိုင္ နိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ ေကာင္း ေတာင္းေပး လိုက္ပါ တယ္ ခင္ဗ်ာ။
ရင်ဖိုဖွယ်ရာ အလှတရားတွေနဲ့ အလှကြီးလှရက်လွန်းနေတဲ့ မမဆောင်းရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
တကိုယ္လံုး အျပစ္ေျပာစရာမရွိေအာင္ လွပလြန္းေၾကာင္း ခပ္မိုက္မိုက္ေလး သက္ေသျပလိုက္ တဲ့ မရန္ဆိုင္းႏူး
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး အလုံး(၇၉၀)ရောက်ရှိပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ဒီဇင်ဘာ၃ ရက်နေ့ မှ စတင် လှူဒါန်းသွားမည့် ဂျွန်လွင်
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အိပ်ခန်းလေး နဲ့ အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်တွေကို ပရိတ်သတ်ကြီးကိုပြလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး